सरकारले दिएको मुआब्जा चित्त नबुझेपछि हाइवेको बीचमा रह्यो घर दुनिया विचित्रको छ ! – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०१, २०७८ समय: २२:५४:१७
विश्वका यी १५ देश जहा महिलाले स्त.न देखाए दिइन्छ यस्तो कठोर सजाय
नेपाल मै भेटियो एक किलोको ३० लाख पर्ने काठ, काठको जंगलमै पुग्दा जे देखियो : यसरी गर्नुहोस यसको खेति (पुरा भिडियो)
काठमाडौँ । कुनै रुखको काठको मूल्य लाखौमा हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । अझ पुरै रुखको हैन एक किलोग्राम कै ३५ लाख रुपैया सम्म पर्छ भन्दा जो कसैले पनि जिब्रो निकाल्छन ।
तर यहि हो वास्तविकता । पुर्वसेना धन बहादुर पुनले गुल्मीमा रहेको आफ्नै बारीमा रोपेका छन् त्यो रुख । जुन रुखको नाम हो अगरुठ । जुन रुखको मूल्य कम्तिमा एक लाख रुपैया किलो र बढीमा ३५ लाख रुपैया सम्म पर्दछ ।
उनै धन बहादुर पुनसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :
पत्त्याउनुहुन्छ ? यो एक बोतल पानीको मुल्य हो १ करोड रुपैयाँ !
एजेन्सी । संसारका सजीव प्राणीहरु सबैका लागी अमुल्य पदार्थ हो । पानीबिनाको जीवन हामी कल्पना सम्म गर्न सक्दैनौ । तर त्यसो भन्दैमा एक बोतल पानीको मूल्य १ करोड भन्ने सुन्दा भने जो सुकै पनि चकित भइन्छ ।
अमेरिकाको एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको पानीको मूल्य एक करोड रुपैयाँ पर्छ । तर, करोड मूल्य पर्ने यो पानीको बोतल पाउन सजिलो भने छैन । पानी किन्नका लागि पहिले कम्पनीसँग अर्डर गर्नुपर्दछ । त्यसपछि बल्ल कम्पनिले पानी उत्पादन गर्छ । र क्रेतालाई उपलब्ध गराउँछ ।
यो पानी खानका लागि भने होइन, लक्जरी कलेक्सनका लागि हो । यो पानीको बोतलको बिर्को नै सुनबाट बनाइएको हुन्छ । जसमा १४ क्यारेटका ६ सय वटा सेतो तथा २ सय ५० वटा कालो हिरा जडित गरिन्छ । हरेक बोतलका लागि छुट्टा–छुट्टै खोल बनाइएको हुन्छ । यो बहुमूल्य बोतलको पानीको नाम बेवर्ली हिल्स (ढण्ज्द्दइ) राखिएको छ ।
यो पानी कम्पनीको प्रधान कार्यालय भने अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित बेवर्ली हिल्समा छ । कम्पनीले एकदमै अग्लो झरनाबाट पानी संकलन गरेर तयार पार्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।